”Hadda sidii hore waa ka xoog badan nahay!” – Garabyada Falastiin oo sameeyey dhoollatus ”midaysan” | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Hadda sidii hore waa ka xoog badan nahay!” – Garabyada Falastiin oo...
”Hadda sidii hore waa ka xoog badan nahay!” – Garabyada Falastiin oo sameeyey dhoollatus ”midaysan”
(Marinka Gaza) 03 Jan 2021 – Falastiiniyiinta Marinka Gaxa ayaa markii ugu horreeysey qabtay dhoollatus millateri oo ay u dhan yihiin dhinacyada ka jira halkaasi, si ay mustaqbalka dhow iskaga kaashadaan weerar uga yimaada Israel.
Afhayeen ololahan u hadlay ayaa sheegay in dhinacyada dhoollatuskan ka qayb galay oo kala ah Hamas, Islamic Jihad, iyo qaar ka tirsan PLO ay ”diyaar u yihiin inay si wadajir ah iskaga caabbiyaan cunfiga iyo dulmiga Israel.”
Wuxuu intaa ku daray inay hadda kaddib yeelan doonaan hal talis iyo hal hoggaan, wuxuuna ku gooddiyey in tacaburka Israel ay ka waddo Gaza ay kala kulmi doonto “la yaabyo badan.”
Wuxuu kaloo sheegay inay cududdooda kordhiyeen sanadihii dambe oo ay haatan ka xoog badan yihiin sidii ay ahaayeen sanado kahor, isla markana ay ”jug gaarsiin karaan cadowga”, sida uu yiri.
Yeelkeede, waloow ay dhinacyada kale oo dhami ka qayb qaateen dhoollatuska, waxaa maqnaa garabka Fatax ee uu hoggaamiyo Mahmoud Abbas oo ku xooggan dhanka Daanta Galbeed oo ka mid ah labada qaybood ee dhulka Falastiin u kala go’an yahay.
Previous articleDAAWO: Dadka Ingiriiska oo durba dareemay culaysyada ka dhashay Brexit (Dad shalay dayuurado laga reebay)
Next article”Xitaa gudaha Maraykanka idinkuma cafin doonno!” – Iiraan oo sheegtay inay u aargudayso Qasem Soleimani oo la diley maanta oo kale